ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
သာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်နိုင်ရန်အတွက်လက်လှမ်းကုန်သွယ်ရေး-ရောင်ပြန်ဟပ်သောဤအဆင့်အနေအသိပေးသာတိုးစေရန်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ။ စတင်ကာမည်သူမဆိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သောအခြားဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလျှောက်ထားအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဂျာမဏီသို့မဟုတ်သြစတြီးယား။ ဒါဟာသင့်တိကျတဲ့ အဖြေလေး-အဆင့်ဝန်ဆောင်မှု၊ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်အရည်အချင်းမယာေလ်ာ္ေ။ အဖြစ်အတွက်သြစတြီးယားနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကြားစည်းမျဉ်းနှင့်စည်းမဲ့ကမ်းအသက်မွေးဝမ်း။ ဤစီမံကိန်းများအတွက်လှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်စာရင်းများအစည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလိုအပ်သည်အချို့သောအရည်အချင်းများ။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်လူများအဘို့အလုပ်လုပ်ကိုင်အတွက်ကျန်းမာရေး၊အာဟာရ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြားကဏ္ဍများ။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်အသစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်စွာ၊သင့်လျော်တဲ့အရည်အချင်း၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံ။ မည်သူမဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်တတ်သောသူအယူအဆဆီကားနှင့်ကြော်ငြာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနိုင်ရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့၊ဒီရပါမည်မိမိတို့အသစ်ကိုအပလျော်ကြေးအဆင့်အတန်းနိုင်ရန်အတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရ။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်လျော်ကြေးဏာစစ်ဆေးနိုင်ရန်ပြည်နယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်အသိအမှတ်ပြုမှသာလျှင်လူတစ်ဦးကိစ္စများကုန်ပို့လွှာအများအပြားကုမ္ပဏီ၊ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုထမ်းသောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအန္တရာယ်။ အသိအမှတ်ပြုဖို့သင် သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အများအပြားစာရွက်စာတမ်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြီးစီးခဲ့ပုံစံသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတစ်ဦးချင်းသကဲ့သို့လုပ်ငန်းရှင်များ၊ကြော်ငြာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်အကောင့်သို့ယူပြီးထုတ်ကုန်ပို့လွှာ၊ငှားရမ်းသဘောတူညီချက်များ၊တင်ပြပွားစာချုပ်။
ပြီးတော့အကြောင်းဖွင့်ဖွင့်လှစ်အခမ်းနားဖွယ်မြင်ကွင်းကျယ်! အာကာသများအတွက်ရှည်လျားသောတောင်ခြေနှင့်တောင်ပေါ်သစ်တော၊ရဲရင့်ကျောက်ဖူကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေကြတယ်မှာချောမွေ့တဲ့အစိမ်းရောင်အရောင်။ ဒီမှာအချိန်ဖြစ်ပုံရသည်ရှိသည်ဖို့ရပ်တန့်။ လက်သမားအလုပ်လုပ်အတွက်အတိတ်ရာစုနှစ်ဘဲ ။ ရှိပါတယ်အိမ်နှင့်တည်ငြိမ်၊အစိမ်းရောင်တောင်လွင်ပြင်မှာသဟဇာတ။ သည်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအဆက်မပြတ်ဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်တိုးတက်လာ၊ကျွန်တော်အကြံပြုပါသည်အကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှု။ ဒီဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်၊သင်သည်အကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှု။ အကြောင်းပိုမိုသောအချက်၊အမြင်ပိုင်းကို"နှင့်ထို့နောက်တို့၏အမြင်ခမ်းနားဖွယ်မြင်ကွင်းကျယ်"! အာကာသများအတွက်ရှည်လျားသောတောင်ခြေနှင့်တောင်ပေါ်သစ်တော၊ရဲရင့်ကျောက်ဖူကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေကြတယ်မှာချောမွေ့တဲ့အစိမ်းရောင်အရောင်။ အချိန်ဖြစ်ပုံရသည်ရှိသည်ဖို့ရပ်တန့်။ လက်သမားအလုပ်လုပ်အတွက်အတိတ်ရာစုနှစ်ဘဲ ။ ရှိပါတယ်အိမ်နှင့်တည်ငြိမ်၊အစိမ်းရောင်တောင်လွင်ပြင်မှာသဟဇာတ။
Internet orqali Shveytsariya bilan uchrashuv. Shveytsariya saytlari, shveytsariyaliklar bilan qanday turmush qurish mumkin
အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ တွေ့ဆုံရန် ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးလို။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ တွေ့ဆုံလက်ထပ် စကားပြောမပါဘဲဒီယို ဗီဒီယို ချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင်၏အနှစ်